पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुबीच भिडियो कन्फ्रेन्स « Drishti News – Nepalese News Portal
४ भाद्र २०७६, बुधबार ४ : ५० मा प्रकाशित
काठमाडौं, ४ भदौ । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुबीच आज भिडियो कन्फ्रेन्स भएको छ । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र ७ वटै प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुबीच अनुभव आदान प्रदान र समन्वय गर्ने उद्देश्यले भिडियो कन्फ्रेन्स आयोजना गरिएको हो । भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सिंहदरवारस्थित आ–आफ्नै कार्यकक्षबाट सहभागी हुनुभएको थियो ।
कोरोनाविरुद्धको नीति प्रभावकारी भएको प्रधानमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध कठोर नीति लिन नसक्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकको अवस्था भयावह
ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त
सरकार बनाउन नसक्नेले प्रतिगमन भन्नु गलत : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन गर्न नसक्नेहरूले मुलुकमा प्रतिगमन भएको आरोप लगाइरहेको